पूर्वयुवराज पारसद्वारा बर्दीवाला प्रहरीमाथि हातपात : तर, प्रहरी नै भन्छ – सामान्य घटना हो ! | Ratopati
पीडित प्रहरी भन्छन् – खै के चित्त बुझेन, एक्कासी आएर हातपात गर्नुभयो
personसुजन पन्त exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २, २०७६ chat_bubble_outline4
पूर्वयुवराज पारस शाह विभिन्न लफडाको कारण विवादमा आइरहन्छन् । अनेकन् आपराधिक र अराजक क्रियाकलापसँग जोडिएका पारस शाहले युवराज हुनुअघिदेखि नै मादक पदार्थ सेवन गरेर सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला, आम मानिसमाथि मारपिटदेखि फायरिङसम्ममा घटना घटाउँदै आएका थिए । कुनै बेला गायक प्रविण गुरुङ मृत्यु प्रकरणमा समेत पारसको नाम जोडिएको थियो । नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत लागुपदार्थ सेवनको आरोपमा पारस पक्राउ परिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय विगतमा धमिलिएको छवि सुधार्न धार्मिक वा सामाजिक कार्यमा सहभागी भएर जनताको नजिक हुने प्रयासमा लागेका पारसले आइतबार फेरि अर्को काण्ड मच्चाएका छन् ।
सार्वजनिकस्थलमै पारसले बर्दीधारी प्रहरीमाथि हातपात गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआईपी कक्षको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ईश्वर खत्रीमाथि पारसले हातपात गरेका हुन् ।
३ महिनाअघि मात्र विमानस्थलमा आएका सई खत्रीले छोरा र भान्जालाई चेकजाँच गर्न खोजेपछि पारसले हातपात गरेको बताइएको छ । यस विषयमा सई खत्रीले यस्तो होला भनेर आफूले नसोचेको बताए ।
उनले भने, ‘खोई के कुरामा उहाँलाई चित्त बुझेन । एक्कासी आएर हातपात गर्नुभयो । घटनाबारे विमानस्थल प्रहरीको माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु ।’
आमा कोमल शाह र छोराछोरीलाई थाइल्यान्ड जान लागेको समयमा बिदाई गर्न पारस विमानस्थल पुगेका थिए । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह २ साताअघि मात्रै थाइल्याण्ड गएका थिए भने हिमानी शाह पनि थाइल्याण्डमै रहेकी छिन् ।
आफ्ना छोरा र भाञ्जामाथि प्रहरीले ‘अपमान’ गरेको भन्दै पारसले सई खत्रीलाई छातीमा समातेर धकलेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
भिडियोमा देखिएको दृश्य हेर्दा पनि पूर्वयुवराज पारस फर्की–फर्की सई खत्रीमाथि झम्टिएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथिको दुव्र्यवहार गर्ने पूर्वयुवराज पारसलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
सामान्य नागरिकले पारसको जस्तो हर्कत गथ्र्यो भने तत्कालै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर समात्न सक्ने नेपाल प्रहरी पारस प्रकरणमा भने मौन रहेको छ ।
प्रहरी आचारसंहिता अनुसार ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कसैले हातपात गरेमा प्रहरीले सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउन सक्छ । तर, पारसलाई नेपाल प्रहरीले के गर्छ यो भने हेर्न बाँकी छ ।
पारसको विषयमा किन बोल्दैन प्रहरी ?
यस विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल केही बोल्न चाहेनन् । सामान्य घटना भएको भन्दै डीआईजी पोखरेलले कुनै औपचारिक जानकारी दिन चाहेनन् ।
परासको शैलीबारे विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतलाई घटनाबारे बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
विगतमा दर्जनौँ जघन्य अपराधमा मुछिए पनि राजपरिवारको सदस्य भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने गरेका पारस शाह लोकतन्त्र स्थापनापछि भने प्रहरी कारवाहीमा परेका छन् ।
यसअघि, २०७५ जेठ ३० गते पारस शाहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका थिए । लतिलपुरको जावलाखेल चोकबाट ट्राफिक नियमको बेवास्ता गर्दै थापाथलीसम्म आएको पारसको बा १४प २१३१ नम्बरको गाडीलाई रोकेर ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो ।
थापाथली ट्राफिकको फन्दामा परेपछि पारसले त्यहाँ पनि लफडा गरेका थिए । ट्राफिकसँग उनले पटकपटक कागजपत्र मागे पनि नपाएपछि पारस गाडी चलाएर लाइसेन्स र ब्लुबुक छाडेर माइतीघरतर्फ हुइँकिएका थिए । पछि उनले ५ सय जरिवाना तिरेका थिए ।
यस्तै २०६७ साल २५ मंसिरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको टाइगर टप्स रिसोर्टमा बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी परिवारसहित बिदा मनाउन गएका बेला पारसले हवाइफायर गरे ।
ठीक त्यही दिन पारस पनि आफ्नो परिवारका साथ बिदा मनाउन टाइगर टप्स रिसोर्ट पुगेको बेला दुई परिवारहरू बसिरहेकै वेला केही विषयलाई लिएर मनमुटाव भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको थियो ।
तत्कालै पारसले बाहिर आएर हवाईफायर गरेका हुन् । पीडित पक्षबाट पारसविरुद्ध सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दर्ता भयो ।
जाहेरी दर्ता भएको ३ दिनपछि पारस पक्राउ परेका थिए ।
Aug. 20, 2019, 12:21 p.m. MERO PANI BICHAR
HAHA HAHA HAHA..............KOHI PARAS (PURANA SARKAR) KA PALTU BHAYE........KOHI .OLI-BELI-SARBASWO KHALU (NAYA AABASAR KA SARKAR) KA PALTU BHAYE.....SANCHO KURA LUKI HALCHHA....JOO BALIYO BHACHHA...USAILE PELCHHA...........TARA GAJJAB KO KURA HAWA NABHAEE PAAT HAL-LIDAINA.....TESAI HAL-LAUNA KHOJEKO HO KI?????
Aug. 19, 2019, 8:42 p.m. Bijay yadav
Chor neta bhaako bhaaSalam thokthiyo holaa ...... Chor netaa haru lai khi garna nasaknay police lay .......
Aug. 19, 2019, 4:58 p.m. puskar poudel
एक सर्बसाधारण मानिस भयर बर्दिवाला पुलिस माथि हातपात गर्न पउँछ यसले, कार्बाहि हुनुपर्छ यसलाई, होेेइन भने अन्यलाईपनि छुट दे सरकार,
Aug. 19, 2019, 4:06 p.m. Ganesh Rana
सन्की,पागल हो तर उसैको जुत्ताको तलूवा चाट्नेहरु लाइन पनि त देखियो नि